राति सुत्दा अन्डरवेयर लगाउने या नलगाउने ? यस्तो छ रोचक तथ्य - Koshi Online
राति सुत्दा अन्डरवेयर लगाउने या नलगाउने ? यस्तो छ रोचक तथ्य
काठमाडौं, २६ पुस । प्रायः मानिसहरु राती सुत्दा जाडो याममा टाउजर र गर्मी याममा अन्डरवेयर लगाएर सुत्ने गर्छन । तर विज्ञहरुले अन्डरवेयर लगाएर सुत्नु गलत भएको बताएका छन ।
उनिहरु भन्छन– राती सुत्दा कपडा नलगाई सुत्नुहोस् जसबाट स्वास्थ्यका लागि फाईदा मिलोस् । उनिहरुको भनाई यो हो की भित्रि अंगहरुलाई राति राहत दिदा इन्फेक्सनबाट बचाउँछ । विज्ञहरुले राती नांगै नसुत्ने हो भने पनि फराकिलो कटन बेरेर सुत्न आग्रह गरेका छन । न्युयोर्कमा गाइनोकलजिस्टको फिल्डमा काम गर्ने डा. अलिसाले लेखेका छन् – ‘मैले सधैं आफ्नो प्यासेन्टहरुलाई भन्ने गर्छु कि विना अन्डरवेयर नै सुत्ने गर्नुहोस् भनेर । यदि सधैं लुगा पहिरेर सुत्नु हुन्छ भने यसले पसिना सुक्दैन् जसले गर्दा ब्याक्टेरियालाई बच्ने मौका मिल्छ र झुँझलाहट, चिलाउने र स्किन इाफेक्स्नको सम्भावना बढाउँछ । यस्तो समस्याबाट सबै भन्दा बढि महिलाहरु पिडित हुने गरेका छन । र यसको असर भने उनिहरुको महिनावारीको समयमा हुने गर्दछ ।
स्ट्यानफर्ड युनिभर्सिटी क्यालिफोर्नियाका डाक्टर आइजेनले पछिल्लो समय गरेको अनुसन्धानमा पुरुषले ओछ्यानमा अन्डरवेयर पहिरने वा नपहिरने केही त्यति असर नपर्ने जनाएपनि यसअघिको अनुसन्धानमा भने फराकिलो वा टाइट अन्डरवेयर पहिरनले फरक पर्ने भन्दै नांगो भएर सुत्नु एकदम फाइदा भएको बताएका थिए । चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरुको सल्लाह रातमा विना कपडा नै सुत्ने बानी बनाउन लाभदायक छ ।